I-Outbrain: IDrayivu yeDrayivu enezincomo Zokuqukethwe | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 3, i-2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Sizame izinsizakalo ezimbalwa zokubonisa okuthunyelwe okuhlobene kumakhasi ethu weposi elilodwa kuMartech. Njengamanje siyahlola Outbrain futhi kufanele ngithi ngithathekile impela. Nayi incazelo yesevisi:
I-Outbrain inesifinyezo analytics package Ehlinzeka ngemininingwane yokuchofoza nokuthandwa kokuthunyelwe ngakunye okulethwe ngohlelo lwazo. Singeze okuphakelayo kwethu ukukwenza kube lula - kepha futhi sabelana ngokuthunyelwe kwethu okudume kakhulu. Ngokuboniswa kusayithi lethu, sinikela ngokuzikhethela noma yikuphi ukuchofozwa okukhokhelwayo kusuka kubhulogi yethu kuya kunhlangano esiza abampofu… inketho epholile kakhulu elandelwa endaweni yesikhulumi se-Outbrain.
Nalu usuku lwethu lokuqala olukhethekile lokusebenzisa i-Outbrain:
Okubaluleke kakhulu, yethu okuqukethwe okufanele ikhonjiswa kumasayithi anezithameli ezinkulu kakhulu kunaleso esinaso… kepha ngithola isinqumo sokuthi isabelomali sami sansuku zonke siyini nokuthi yimali engakanani engizimisele ukuyisebenzisa ngokuchofoza ngakunye. Leyo yitrifecta… indawo elungile, isikhathi esifanele, nentengo elungile. Ngibheke phambili ekuboneni ukuthi i-Outbrain ingaqoqa kanjani abafundi abasha Martech Zone!
Kufakwe kumasayithi angaphezu kwama-50,000 omshicileli aphezulu namabhulogi, i-Outbrain iyipulatifomu ehamba phambili yokuncoma okuqukethwe kuwebhu. Ipulatifomu yethu ihlanganiswe ngaphansi kwama-athikili kumasayithi amaningi wabashicileli be-premium lapho abafundi bafuna ngenkuthalo ukuthola okuqukethwe okusha. Lokhu kubekwa okuhlukile kubukwa ngabafundi njengokuvunyelwa kokuhlela, okusivumela ukuthi silethe izethameli zekhwalithi ephezulu zabathengi abazihlonza njengabanentshisekelo kokuqukethwe komthengisi
Thola iwijethi yamahhala ukuqala ukubonisa okuqukethwe okufanele kwangaphakathi kusayithi lakho namuhla.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweizincomo zokuqukethweinjini yokuncoma okuqukethweipulatifomu yokuncoma okuqukethweiwijethi yokuncoma okuqukethweukuphuma kwengqondoppciwijethi yokuqukethwe ehlobeneamawijethi
UDouglas ngibhalisela kanjani iBlog yakho. I-BTW, lokhu kufakwa ku-Outbrain bekufike ngesikhathi futhi kunolwazi. Ngiyabonga!
Aug 1, 2012 ngo-8: 07 PM
Kuningi okuhle ngabashicileli bokuqukethwe ukwenza okuqukethwe kwabo kubonakale enetheni.
I-Oct 16, i-2012 ku-1: i-28 PM